Dhanka, maxaa TikTok loogu magacaabaa TikTok? - KU SAMEEYSAA
ACCUEIL » TECH & TELECOM Dhanka, maxaa TikTok loogu magacaabaa TikTok?
TikTok waxay leedahay in kabadan 500 milyan isticmaaleyaal firfircoon. Laakiin ma ogtahay meesha magaca codsigan ka yimid?
Sida usbuuc kasta, Numerama waxay sharrax ka bixisaa asal ahaan magaca weyn ee farsamada. Markan, waxaan weeraraynaa TikTok. Aflagaade: wax shaqo ah kuma lahan tuubada 2009 ee Ke $ ha.
Codsi ayaa laga bilaabay 2016
TikTok waa codsi la wadaagayo fiidiyowyo gaagaaban. Waxaa laga abuuray Shiinaha, halkaas oo loogu magac daray Douyin, Sebtember 2016. Asal ahaan, waxaa jiray fiidiyowyo muusig oo muusig ah, gadaal gadaal ka shaqeynayay iyo qoob ka ciyaar Sababtaas ayay u tahay shirkadda waalidkeed, ByteDance, iibsaday Musica.lybarnaamij caan ah oo ciyaar-ciyaar oo caan ah oo ku yaal Yurub. Labada shirkadood waxay ku midoobeen bishii Agoosto 2018 magaca TikTokna dib ayaa loo sii waday.
Laga soo qaatay TikTok. // Xigasho: Shaashadda YouTube
Af hayeen u hadlay shirkadda ayaa u sheegay Numerama in magaca uu ka yimid weedha " Tirin kasta oo labaad Af Faransiis: tirinta labaad kasta. Si loo muujiyo marinka waqtigaas saacad, mid ayaa adeegsanaya Faransiiska iyo waddamada kaleba ereyada "Tic Toc" (ama jileec), oo loo higgaadiyey siyaabo kala duwan.
Waqtigu wuxuu leeyahay muhiimadiisa TikTok, maxaa yeelay muddada fiidiyowyada ayaa xadidan. Waa inaysan dhaafin 15 sekan midkiiba, xitaa haddii ay macquul tahay in lagu daro dhowr isku xigta.
Xadkaasi kama hor istaagin adeegsadayaasha inay la tartamaan mala-awaalka. TikTok hadda wuu ka badan yahay madal ciyaar-gadaal laga ciyaaro. Waxay noqotay barkad lagu xasuusto, laakiin sidoo kale waxaa jira waxyaabo la xiriira quruxda, cuntada karinta ama bandhigyada isboorti. Qaar waxay isbarbar dhigaan si raalli ah Vine, shabakad kale oo bulsho maanta waa la xiray.
Ugu yaraan 500 milyan oo isticmaale
TikTok waa la tirin lahaa maanta in kabadan 500 milyan oo adeegsadeyaal firfircoon oo dalabka ayaa la soo dejisan lahaa bilyan jeer.
Dhammaantood kuma cusbooneysiiin masraxa, oo ahayd inay la dagaallamaan muranno badan. Waxyaabaha kale, waxaa lagu eedeeyay in aysan si ku filan u ilaalin karin xogta isticmaaleyaasheeda dhalinyarada ah ama ay u oggolaanayso kuwa ugaarsiga galmada la xiriira. Hindiya xitaa waa ay jiri jirtay in la mamnuuco dalabka dhawr maalmood sababtaas awgeed.
TikTok wuxuu sidoo kale ku jiray bartilmaameedka weydiinta dhexdhexaadiyayaasheeda bilo ka hor si ay u tirtirto waxyaabaha loo arko inay siyaasad ahaan ama mid aad muhiim ugu ah dowladda Shiinaha. Shirkadda waxay tilmaamtay in tilmaamahaani aysan shaqeyneyn.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.numerama.com/tech/567469-au-fait-pourquoi-tiktok-sappelle-tiktok.html#utm_medium=distibuted&utm_source=rss&utm_campaign=567469
Ku muuji baararka xoqida daaqadaha Windows 10